Ofbọchị Ọrụ | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 15, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anụrụ m na akụkọ taa na nwunye Dr. Martin Luther King chọrọ ka ụbọchị ahụ bụrụ ụbọchị ọrụ. Enwere ụfọdụ asusu na ozi ahụ ka m na-ede post a site na Starbuck. Nke a bụ ụbọchị m taa:
Nwa m nwanyị lọtara n'abalị ụnyaahụ, ahụ ọkụ anyị na-elekọta kemgbe awa 24 gara aga. O aburula oru ehihie na abali nke papa na nwanne nwoke! Papa m gbara oso ogwu maka ihe ndi ozo, nwanne na-eme ka ebe a di nkpa mgbe nwanne m nwanyi enweghi ike igba oso na ebe a na-asa aru n’oge. Ọnọdụ okpomọkụ ya rịrị elu nke na akpọrọ m Dọkịta, bụ onye gwara m ka m chere ya. Amaara m na anyị nọ na nsogbu, agbanyeghị, mgbe m banyere n'ọnụ ụlọ ya ma ọ na-arị elu na akwa akwa ahụ, na-atọ ezigbo ụtọ. Anyị mere ka obi dajụọ ya ma mee ka ọ hie ụra. Kpee ekpere - ọ ga-abụkwa abalị ogologo abalị a.
N'otu oge ahụ, DSL m kpebiri iwepụ nsị mgbe afọ 4 nke njikọta siri ike. Yabụ enwebeghị m oku dịkarịa ala karịa ekwentị 8 na AT&T, nleta sitere na teknụzụ 1 'akara', ma echi enwere m onye ọrụ 'DSL' na-abịa. Ihe omume ahụ bụ ihe nzuzu. Ana m enyocha email site na PDA maka ụbọchị 2 ma enweghị ike ịme ihe ọ bụla. N'oge nwa m nwanyị na-ehi ụra oge m na-arahụ ara ara.
Mgbe ahụ, ka m kwụsị ya, enwetara m oku na-enweghị nkwụsị site na ndị folks chọrọ enyemaka taa. Enwebeghị m ike inyere onye ọ bụla aka n'ihi na DSL m dara. N'ihi ya, m gbapụrụ maka nkeji ole na ole n'abalị a, na-ahapụ nwa m nwoke na-elekọta na nwa m nwanyị na-ehi ụra, iji mee ka unu niile mara na m na-eje ozi dị ka m nwere ike ma nwee olileanya ịlaghachi online, ma n'ụzọ anụ ahụ ma na nkà na ụzụ, na ụbọchị ole na ole.
Oriakụ Eze, ama m na inwere ihe ọzọ ị chọrọ ikwu mgbe ị na-ekwu maka ọrụ… mana ama m na ị ga-aghọta na m na-eme ihe kachasị mma ugbu a. 🙂
Otu mpempe ozi ọma taa, edepụtara m na Blogs Blog 150 dị ike nke Todd ma tinye ọnụ… M ugbu a # 80!
Daalụ, Todd! Nice algorithm na ogo n'usoro!
AT&T mechuru m ihu na izu ụka a, ma ndi oru ha emeghi
Jenụwarị 15, 2007 na 9:51 PM
Hey Doug - Nwoke, olee otu ụbọchị - echiche m dị na gị na ezinụlọ gị.
Jenụwarị 16, 2007 na 1:36 PM
Doug, nwee olileanya na nwa gị nwanyị enweela mmetụta karịa!